iPhone VS Android: midka aad jeceshahay wanaagsan?
Just daalin ee Android phone iyo boodi markabka si iPhone? Waxaan u maleynayaa in badan tahay in aadan dooneynin inuu ka tago biro mid ka mid ah xogta shakhsiga aad muhiim u ah ka dambeeya? Halkan sida in ay alaabahooda walba, sida xiriirada, music, sawiro, SMS, iyo in ka badan ka Android inay iPhone aan ka kaaftoomi kasta. Iska akhriso on.
Qaybta 1. Android VS iPhone: Waa maxay faraqa u tahay
Qaybta 2. dheeraad ah ka dib markii Talooyin Mase ka Android inay iPhone
Sababtoo ah ee kala duwan ee qalabka loo adeegsado telefoonnada Android kala duwan, nolosha batari ku kala duwan yihiin. Markii ugu danbeysay dheer Qaar ka mid ah, halka qaar ka mid ah baahi loo qabo in la soo eedeeyay kasta dhowr saacadood, gaar ahaan marka aad la ciyaareyso kulan. dheeraad ah oo ku saabsan sida loo badbaadiyo nolosha batari Baro >>
Waa adag tahay in la yidhaahdo haddii iPhone nolosha batari waa ka sii dheer tahay Android phone. Haddii aadan waxba sameyn laakiin kaliya iPhone ku shaqeeya, waxa uu socon karaa muddo dheer.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u ciyaaro barnaamijyadooda, filimada watch, aad iPhone si dhakhso ah mas'uul batari ay waayi doonaan. Talooyin ku saabsan sida loo kordhiyo iPhone batari >>
Badhamada & Home Screen
Guud ahaan, batoonka ka sokow, kor u qaadaysaa codka Audio iyo hoos button, telefoonka Android leeyahay 3 badhamada kale. Waxay tahay badhanka ugu weyn, ka tagay button menu iyo daafaca midig button. Home Screen phone Android leedahay shaashad weyn ee xarunta, oo aad kartaan bogga dhex bidix ama midig. Mid ka mid ah design xariif ah waa in Android phone ayaa widgets, taas oo kuu ogolaanaysaa inaad si deg deg ah iskaan waxa qoreysa aad leedahay telefoonka Android.
duwan phone Android, iPhone oo kaliya uu leeyahay badhan ugu weyn marka laga reebo batoonka oo cod maqal ah kor iyo hoos button. Haddii aad la qabsado oo isticmaalaya telefoonka ah Android, waxaa laga yaabaa in aad dareento xanibayo ka dib markii bedesheen ka Android inay iPhone . screen Home iPhone ee guriga screen waa ka yara duwan tahay Android telefoonka ee. Marka aad simbiriirixan fartaada ka bidix ilaa midig in lagu furo aad iPhone, guriga screen iPhone la soo bandhigi doonaa bidixda. Waxaad xaq u durki karaa in ay ka tageen si ay u helaan screens kale. Intaa waxaa dheer, waa in aad xaqiiqsato in iPhone uusan haysan widgets kasta.
markuu yimaado in ay barnaamijyadooda caadiga ah, phone Android ku siinayaa si xor ah u dooranaya barnaamijyadooda aad rabaan in ay ahaadaan default oo aan soo afjarno. helaan update App On telefoonka aad Android, waxaad samayn kartaa ayaa app si toos ah updated. Waa arrin habboon iyo waqtiga lagu badbaadiyo.
Waxaa wax laga xumaado, khaladkaasi weyn oo ah in iPhone uu leeyahay waa in Apple doonayaa barnaamijyadooda u gaar ah in ay default, sida Safari browser, mail app, map app. Si aad u dhigay barnaamijyadooda-Apple oo aan sida default, waxaad u leedahay in aad JAILBREAK iPhone. Waa sidan sidii ay u JAILBREAK aad iPhone >> update App khaladkaasi kale oo aad u ogolaanaysaa hoos u yahay in barnaamijyadooda ku iPhone ma karo si toos ah la casriyeeyay. Halkii, marka aad leedahay app in la cusboonaysiiyo, waxaad arki doontaa dhowr ah ee casaan on top of the app App Store. Tag ka app App Store oo ka jaftaa Updates in ay barnaamijyadooda doonayay aad in la cusboonaysiiyo. Halkan waxaa ku qoran liiska 17 fiican ee Chine iPhone free >>
Marka aad hesho wargelinta, sida fariin, call a maqan telefoonka ama kuwa kale, waxaad u soo jiidi kartaa shaashadda ka sareeya oo ay hoos u.
Si aad u aragto wargelinta, waxaad kaliya waxaa ka jaftaa. Haddii aadan rabin, dheer waxay aad ku sawirnaa oo simbiriirixan ka bidix ilaa midig. Daafaca dhexe gaadhsiin iPhone la mid tahay Android phone. Kaliya Waxaad mari kartaa hoos uga sare ee shaashadda si ay u arkaan ogeysiis kasta waxaa lagu muujiyey.
Phone in Transfer PC
Nooca Android idiin furan yahay waxay bixisaa fududahay in kaarka SD ay helaan. Waxaad iyo ka telefoonka ah Android effortlessly wareejin karaan music, video, sawiro, xiriirada iyo waraaqaha. Si ka duwan phone Android, Apple oo keliya kuu ogolaanayaa inaad si ay u dhoofiyaan photos Camera in computer. Si aad u dajiyaan / dhoofinta xogta kale, sida music, video, waxaad u leedahay in ay ku tiirsan yihiin Lugood ama qaar ka mid ah qalabka xisbiga saddexaad.
Version kasta Android soo baxa, soo raacay by qaar ka mid ah telefoonada cusub dhaldhalaalaan. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay qaadataa waqti dheer si aad u maraan side wireless hor updates la ansixiyo. Marka la barbar dhigo phone Android, update iPhone macruufka soo baxday in ay aad u fudud. Marka ay jirto version cusub, waxaad ka heli doontaa in tiro ka mid ah in casaan Midigta sare ee Dejinta icon. Daar network iPhone iyo tubbada Guud > Software Update in la gaarsiiyo in ka version cusub macruufka.
Qaybta 2. talooyin dheeraad ah ka dib markii bedesheen ka Android inay iPhone
Ha ku dhibin
Raadi My iPhone
Sida loo isticmaalo FaceTime
Lugood waa software si rasmi ah Apple desktop-ka, waxaad ka caawiyay abaabulo music, sawiro, filimada, barnaamijyadooda, TV muujinaysaa, buugaagta iyo dheeraad ah ee aad iPhone. Waa freeware ah, iyo in aad kala soo bixi kartaa oo ku xidh ka website Apple si fudud. Sidaa daraadeed, aad awooddo
Iibso wax kasta oo aad rabto in aad ka Lugood Store oo u hagaagsan in aad iPhone.
Cusboonaysii iPhone markii a version macruufka sare aad heli karto.
Kaabta aad iPhone in computer ka hor hagaajinta macruufka iyo ka dib soo celin.
Dooro idaacada geeyo jecel yihiin inay maqlaan music aad ugu jeceshahay.
Inkastoo Lugood kaalin muhiim ah oo lagu maareeye aad iPhone, waxaad ogaan kartaa inaan Lugood uu leeyahay qaar ka mid ah ceebaha weyn. Mar kasta waxaa syncs files si aad iPhone, way ka fogayn doontaa kuwa hadda jira. Waa maxay musiibo. Taa ka sii daran, waxa aanu kuu ogolaaneyso in aad si ay u gudbiyaan files, sida music, video iyo in ka badan ka iPhone dib ugu Lugood haddii ay soo iibsatay kuwa. Xaaladdan oo kale, dad badan oo Lugood-sida software ka soo baxay, kaas oo sameyn kara waxa Lugood dhici gaaban, sida Wondershare TunesGo , iExproler, SynciOS.
Sida ay magaceeda soo jeedisay, iCloud waa adeeg daruur. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad badbaadiyo content, oo ay ku jiraan xiriiro, music, sawiro, dokumentiyo iyo dheeraad ah, si ay u daruurtii. Marka aad qotomisay iCloud aad iPhone, aad leedahay fududahay in content waxaa ku helaan.
Baro wax badan oo ku saabsan iCloud >>
3. Ha ku dhibin
Feed daaleen si joogto ah telefoon calls, digniinaha iyo farriimaha. Ma aha in aad u xanuunsataan, in. On aad iPhone, waxa jira goob Ha ku dhibin, oo wuxuu kaa ilaaliyaa la jeedin.
Tubada Settings > Ha ku dhibin . Markaas, sida uu sheegay aad u baahan tahay, si ay go'aan ka gaarto in ay soo jeedin ku saabsan Buugga, qabtay, ogolow Wicitaanada, baaqyadii iyo aamusnaanta.
Baro wax badan oo ku saabsan Ha ku dhibin >>
4. Customize Ringtones
Ma doonaysaa in la sameeyo ringtones caadadii? Waa wax sahlan ma aha, laakiin aad weli qaban karaa. Halkan waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso sida loo isticmaalo Lugood si ay u sameeyaan ringtones.
Dheeraad ah oo ku saabsan sida loo sameeyo DIY iPhone ringtone Baro >>
Talaabada 1: Orod Lugood on your computer iyo hoos playlists ah si aad u ogaato song la doonayo. Dhegayso gabaygii in la doorto 30-labaad ah ama qayb ka yar ee song in ay noqon ringtone ah.
Tallaabada 2. midig u guji ama loo xakameeyo guji heesta. In ay menu hoos-hoos, guji Hel Info . Daaqadda pop-up ka, guji Options . Markaas, buuxi Time iyo Stop Start ee Time oo iyaga sax. Riix OK .
Tallaabada 3. midig u guji ama loo xakameeyo mar kale guji song la mid ah. In ay menu hoos-hoos, guji Abuur Version AAC . Markaas, rabitaanka song kartoo u muuqataa in playlists ah. Jiid iyo hoos si aad u computer.
Tallaabada 4. Change dheeraad ah ka .m4a in .m4r . Haddii aadan si toos ah u bedeli karaan, raac this. Tag Control Panel > Imaanshaha iyo shaqsinimo > Folder Options > View > uncheck Qari kordhin noocyada file la yaqaan . Markaas waa inuu dib u heesta kartoo iyo beddelo dheeraad ah. Markaas, u hagaagsan ringtones si aad iPhone via Lugood.
5. Raadi My iPhone
Your iPhone ka maqan iyo wax fikrad ah meesha aad ka hesho? Ha welwelin. Iyadoo Raadi My iPhone, waxaad isticmaali kartaa qalabka kale Apple inaad hesho iyo in ay ilaaliyaan xogta ku yaal. Just rakibi Raadi My iPhone app ku saabsan qalabka kale Apple. Log galay ID Apple ah in aad loo isticmaalo iCloud. Markaas, hel My iPhone ka baadhi doona oo aad u hesho iPhone maqan khariiradda ah, waxaa quful, muujiyaan fariin ama ka saarto xogta ku yaal.
Badan oo ku saabsan Raadi Baro My iPhone >>
Ku raaxayso isticmaalaya Google Haddaba telefoonka Android jir ah si ay u sameeyaan cod amarradiisa? Haddaba cusub iPhone, waxaad isticmaali kartaa Siri bedelka. Download Siri ka Lugood App Store. Marka aad rabto in aad isticmaasho Siri, aad u dhaqaajiso kartaa adigoo haysta button guriga ilaa aad ka maqli laba dhawaaqo. Markaas, aad su'aalo ku saabsan xiriirada, cimilada, jadwalka iyo tilmaamaha ka codsan kartaa, waxa aad waydiisaa in ay ka taagay ballamaha ama qaylo ah, hubi showtime filimka, email u soo dir qof, iyo in ka badan.
Baro wax badan oo ku saabsan waxa Siri kuu sameyn karo >>
7. Sida loo Isticmaalo FaceTime
FaceTime waa app Apple ah in aad siinaysaa awood u leeyahay inuu ka qayb ah (n) video ama soo wac audio qof ayaa taageeray iPhone, iPad ama iPod taabasho badan WiFi ama shabakadaha gacanta.
Si aad u awood FaceTime aad iPhone, si aad u Settings tegi kartaa> FaceTime. Daar FaceTime. Tubada Isticmaal ID Apple aad u FaceTime iyo saxiixa ku ID Apple aad.
Si aad u isticmaasho FaceTime si ay u sameeyaan ah (n) video ama soo wac audio, waxaad kala socon kartaa siyaabaha soo socda.
Isticmaal xiriirada iyo telefoonka: Tubada Xiriirada app aad screen iPhone. Raadi qof aad ku socoto in la sameeyo wicitaan oo wac. Inta lagu guda jiro wac telefoonka, ka jaftaa FaceTime si ay u sameeyaan ah (n) audio ama video call.
Isticmaal FaceTime: Place ah FaceTime audio / video call oo isticmaalaya aad xiriirada liiska oo laga faaiidaysanayo phone / video ay icon.
Baro info dheeraad ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo FaceTime >>
Demi ka iPhone si iPhone
Nuqul Faylal ay ka Nokia si iPhone
Ka BlackBerry Bedelka SMS si iPhone
Nuqul Xiriirada ka Blackberry in Android
Nuqul Xiriirada ka HTC si iPhone
Faylal ay kala soo wareegeen Motorola si iPhone
Xiriirada kala iibsiga ka iPhone in HTC
Copy Faylal ay ka iPhone in Computer
Faylal ay ka dhaqaaq iPhone si Mac
> Resource > iPhone > iPhone VS Android: Waa kuwee Mid Aad Sameyn Sida wanaagsan?